Fikarohana: Martin Vrijland
Taratasy misokatra ho an'i Peter R. de Vries ao amin'ny raharaha Nicky Verstappen
Filed in TRANSFER NICKY	by Martin Vrijland	amin'ny 13 Desambra 2018	• 13 Comments
Ry Peter R. de Vries malala, tena liana aho nanaraka ny fitsarana tamin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao Nicky Verstappen, izay nanamelohana an'i Jos Brech ampahibemaso. Noho ny fahamaizinana: Izaho dia tsy mpiaro an'i Jos Brech, na ny tsy fanaovana firaisana ara-nofo na ny mpamono olona. Na izany aza, toa mafy tokoa fa ity tranga ity dia toe-tsaina ara-tsaina [...]
Ny Jos Brech: "Psyop procession" raha tsy taorian'ny fahavaratra 2019
Filed in TRANSFER NICKY	by Martin Vrijland	amin'ny 12 Desambra 2018	• 10 Comments
Avy amin'ireo tweet mivantana avy amin'ny mpitati-baovao Telegraaf Saskia Belleman, toa hita fa ity raharaha Nicky Verstappen ity (fitsabahana) dia tsy inona fa lahateny fotsiny. Bitsika sasantsasany izay haneho fa i Jos Brech dia niaiky fa nandefa sary vetaveta ankizy tao amin'ny solosainy, saingy nilaza izy ireo fa tratran'ny virosy izy ireo. Jos [...]
Ny polisy 33 dia mahita tampoka ny antontan-taratasin'i Jos Brech taloha isan-taona!
Filed in TRANSFER NICKY, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 9 Novambra 2018	• 0 Comments
Fikarohana fohy, mazava ho azy, ary asa tsy vita izany, saingy tampoka dia nisy ny antontan-taratasy tranainy nataon'i Jos Brech, izay nanaovany fanararaotana ara-nofo tamin'ny zaza tsy ampy taona. Nalaina ara-drariny io tranga io, saingy tsy misy dikany izany. Peter R. de Vries dia niaraka tamin'ny fifandraisana rehetra [...]
Ny tsara amin'ny tahirin-tsoratra nasionaly momba ny ADN, ankoatra ny famahana ny raharaha famonoan'olona
Filed in TRANSFER NICKY, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 26 September 2018	• 11 Comments
Mazava ho azy, ny alan'i Holandy dia nahatsapa fa nitarika ny trangan'i Jos Brech ny tranga Nicky Verstappen. Hatreto, ny ADN dia nitarika ny fisamborana an'i Jasper Steringa tao amin'ny raharaha Marianne Vaatstra, noho izany dia ny ADN no vokatra. Na izany na izany dia nitarika rafitra ara-dalàna vaovao nampidirin'ny mpanao gazety maoderina mpanao gazety Peter R. de [...]
Porofo fa toa i Gerald Roethof no mpisolovava PsyOp tao amin'ny raharaha Brech Jos
Filed in TRANSFER NICKY, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 25 September 2018	• 8 Comments
Ny ankamaroan'ny tranga famonoana efa ela no nahasarika ny fampahalalam-baovao dia efa voavaha miaraka amin'ny AD mahagaga. Eny, vahaolana amin'ny alalan'ny fampitam-baovao avy amin'i Peter R. de Vries izy ireo ary avy eo dia manosika ny cyber-ny haino aman-jery amin'ny fitsarana iray izay mihazona ny sazin'ny vahoaka mihantona, tsy misy fiarovan-tena marina. [...]
Amin'ny fomba ahoana no hamintinan'ny haino aman-jery ny tantaran'izy ireo amin'ny fanadihadiana mavesa-danja ary manohy manongotra ny tantarany (Jos Brech)
Filed in TRANSFER NICKY, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 24 September 2018	• 3 Comments
Gaga tamin'ny fahitako fa nijery ny famerenana an'i Pauw aho, izay nanamafisan'ilay mpisolovava an'i Jos Brech, Gerald Roethof, ny tantarany tamin'ny lahatsoratra navoakako andro vitsivitsy talohan'ny fampitana. Tena manaitra tokoa izany fa misy tampoka roa feno tampoka eo amin'ny latabatra. Trompetra vaovao izay mahatonga ny olona ho voafaritra tsara momba ny [...]
Ny andrana manaraka ao amin'ny Nicky Verstappen - psyop Jos Brech? Nahitana sary vetaveta ankizy!
Filed in TRANSFER NICKY, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 20 September 2018	• 12 Comments
Raha tianao OM manan-taona mba hanomana ny olona ho fepetra vaovao amin'ny alalan'ny PSYOP (asa ara-tsaina), dia mazava ho azy no ho azo antoka fa manana ny marina olo-malaza ao amin'ny toerana tsara ho an'ny tantara ao amin'ny fisaonana foana to spin. Midika izany fa manana ny marary [...]
Nahoana i Jos Brech no nandefa misitery toy izany?
Filed in TRANSFER NICKY, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 6 September 2018	• 2 Comments
Ny tantara manodidina an'i Jos Brech, ilay lazaina ho mpangalatra sy mpangalatra an'i Nicky Verstappen, dia nipoitra tampoka ambony. Omaly dia nalefa tany Holandy niaraka tamin'ny fiaramanidina manokana izy. Mety handany vola izany! Tsy azo atao ny fiaramanidina iray, satria miresaka momba ny tompon'andraikitry ny zava-mahadomelina izay mety hamotsorana ireo mafia namany amin'ny fotoana rehetra. [...]
ADN ny teny mahagaga izay mamotika ny vono olona rehetra sy ny fametavetana ara-nofo!
Filed in TRANSFER NICKY, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 30 August 2018	• 3 Comments
ADN no fitaovana enti-mavesa-danja vaovao ho an'ny polisy sy ny rariny ary ny tsirairay dia feno fiderana! Afaka mamaha ny zava-drehetra amin'ny ADN amin'ny ADN ianao. Ohatra, raha maty ny namanao ary misy ADN amin'ny akanjony, dia fantatsika avy hatrany hoe iza ilay mpamono olona! Tena fampandrosoana tokoa ny teknolojia [...]
Mamono mpamono olona ao amin'ny Nicky Verstappen - Jos Brech PsyOp
Filed in TRANSFER NICKY, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 29 August 2018	• 1 Comment
Ny andian-dahatsoratra "Netflix" ao amin'ny Netflix dia mampiseho ny fomba ahafahan'ny olona mijanona amin'ny fanatsoahan-kevitra diso nandritra ny taona maro. Raha ADN ao anatin'io andian-dahatsoratra io dia matetika ny singa mpanavotra, ADN koa dia ny fitsipika vaovao izay mifototra amin'ny fanaovana famonoana olona. Ao anatin'ny fiasa ara-tsaina (PsyOp) dia manome antoka ianao fa [...]
Total visits: 14.675.306